62% no miaina ny tebiteby, araka ny fanadihadiana nataon'ny SingleCare vaovao - News | Desambra 2021
Fanabeazana Ara-Pahasalamana Orinasa, Fanabeazana Ara-Pahasalamana Fahasalamana Orinasa, Vaovao Ny Fizahana Community, Company Zava-Mahadomelina Vs. Namana Pets Fialam-Boly Orinasa, The Checkout Fanatanjahan-Tena Mavesatra Wellness Orinasa News Fanabeazana Ara-Pahasalamana, Vaovao
Tena >> News >> 62% no miaina ny tebiteby, araka ny fanadihadiana nataon'ny SingleCare vaovao
62% no miaina ny tebiteby, araka ny fanadihadiana nataon'ny SingleCare vaovao
Ny fanahiana dia vokany azo takarina amin'ny zava-misy ankehitriny. Eo anelanelan'ny valanaretina coronavirus, ny olan'ny fitsarana ara-tsosialy ary ny fifidianana filoham-pirenena ho avy, tsy lavitra ny fiheverana fa mety hitombo ny fanahiana. SingleCare dia nanadihady olona 2 000 hahalala bebe kokoa momba ny tebiteby any Amerika ankehitriny. Asehon'ireo fikarohana ireo fa mitombo ny tahan'ny tebiteby any Amerika raha ampitahaina amin'ny antontan'isa fitaintainanana teo aloha , indrindra ny Replication Survey National Comorbidity Survey (NCS-R) voalaza matetika 2001-2003.
Famintinana ny zavatra hitanay:
Ny 62% dia miaina ny fanahiana sasany.
Manakaiky ny antsasaky ny valinteny no miaina fanahiana matetika.
Ny aretin-tebiteby amin'ny ankapobeny dia karazana aretina miteraka tebiteby.
Ny fanahiana no fahita eo amin'ny vehivavy kokoa noho ny amin'ny lehilahy.
Ny salanisan'ny taonan'ny diagnostika dia eo anelanelan'ny 24 sy 35 taona.
Ny tahan'ny diagnostika fitaintainanana dia ambany ho an'ny vondrona vitsy an'isa.
Ny adin-tsaina ao an-trano no antony voalohany mampitebiteby.
Ny torimaso, ny fifandraisana ary ny fahasalamana ara-batana no tena iharan'ny fanahiana.
75% ny valinteny voan'ny tebiteby koa dia manana aretina mitaiza.
Ireo olona efa zokinjokiny 55-64 taona no tena tsy miahiahy momba ny areti-mandringana COVID-19.
Ny vidim-bola no sakana lehibe indrindra amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana fitaintainanana.
Ny 62% dia miaina ny fanahiana sasany
Ny valim-pikarohanay dia mampiseho fitomboan'ny diagnostika ara-pahasalamana ny tebiteby raha oharina amin'ny 2001-2003 NCS-R . Ny fanadihadianay dia nampiharihary fa 21% ny valin-kafatra dia voan'ny diagnostika fitaintainanana amin'ny taona 2020 raha 19% kosa ny olon-dehibe amerikana tafiditra ao amin'ny NCS-R dia nanana aretina mitebiteby tamin'ny 2001-2003. Hitanay ihany koa fa ny ankamaroan'ny valinteny any Amerika (62%) dia miaina karazana tebiteby na manana fitiliana izy ireo na tsia.
21% amin'ireo olona voavaly no voamarina fa nitebiteby noho ny fanahiana.
21% ny valinteny dia tsy manana aretina mitebiteby fa mbola miaina fanahiana indraindray.
20% amin'ireo mpamaly no mino fa manana tebiteby izy ireo saingy mbola tsy voamarina ara-pahasalamana.
38% amin'ireo mpamaly no voalaza fa tsy miaina fanahiana.
Manakaiky ny antsasaky ny valinteny no miaina fanahiana matetika
Manakaiky ny antsasaky (47%) ny valim-panontaniana momba ny fanadihadiana izay manana fari-pahaizana sasany no miaina izany matetika. Ny ankamaroany (75%) dia efa niaina fanahiana tao anatin'ny enim-bolana lasa.
Amin'ireo mpamaly izay nitatitra fa manana fanahiana kely:
47% amin'ireo mpamaly izay miaina ny fanahiana no miaina izany matetika.
28% ny valinteny izay niaina izany dia niaina izany tao anatin'ny enim-bolana lasa.
9% ny valinteny izay niaina izany dia niaina izany tamin'ny taona lasa.
5% ny valinteny izay niaina izany dia niaina izany hatramin'ny roa taona lasa izay.
4% ny valinteny izay niaina izany dia niaina izany tamin'ny telo ka hatramin'ny dimy taona lasa.
7% ny valinteny izay niaina izany dia niaina izany mihoatra ny dimy taona lasa izay.
Ny aretin-tebiteby amin'ny ankapobeny dia karazana aretina miteraka tebiteby
Araka ny NCS-R, phobias manokana no aretin-tebiteby fahita indrindra, nahatratra olon-dehibe maherin'ny 19 tapitrisa tany Etazonia teo anelanelan'ny 2001-2003. Ny phobias manokana dia tahotra mahery vaika, tsy mitombina amin'ny zavatra iray na toe-javatra manokana izay miteraka fihetsika ialana. Na izany aza, ny fanadihadianay dia nahita fa ny aretina miteraka fanahiana mahazatra indrindra dia ny aretina mitebiteby amin'ny ankapobeny (GAD), aretina iray izay omen'ny NCS-R ambany noho ny 3% an'ny olon-dehibe amerikana tamin'ny 2001-2003. Ny GAD dia miavaka amin'ny fahatsapana fanahiana na fanahiana tsy miova izay matetika tsy miteraka.
50% no voan'ny aretin-tebiteby amin'ny ankapobeny.
Ny 39% dia voan'ny aretina mitebiteby sy aretin-tsaina.
32% no manana phobia ara-tsosialy na aretin-tsaina ara-tsosialy.
29% no manana aretina mikorontana .
21% no voan'ny aretin-tsaina taorian'ny post-traumatic ( PTSD ).
15% no manana aretina mampijaly ( OCD ).
9% dia tsy voan'ny diagnostika aretina.
Ny 3% dia manana karazana fikorontanana hafa toy ny phobias manokana, ny tebiteby amin'ny fisarahana sns.
Amin'ny tontolon'ny amerikana rehetra:
31% no voan'ny aretin-tebiteby amin'ny ankapobeny.
24% no manana fangirifiriana sy aretin-ketraka mifangaro.
20% no manana phobia ara-tsosialy na aretin-tsaina ara-tsosialy.
18% no manana aretina mikorontana.
13% no voan'ny aretin-tsaina taorian'ny post-traumatic (PTSD).
9% no manana aretina miteraka faneriterena (OCD).
Ny fanahiana no fahita indrindra amin'ny vehivavy noho ny lahy
Ny fanadihadianay dia nifanaraka tamin'ny fanadihadiana taloha izay nahitana fa ny aretin-tebiteby matetika dia matetika amin'ny vehivavy no miakatra amin'ny lehilahy. Mifanaraka amin'ny valin'ny fanadihadihana nataonay fa mitombo ny diagnostika fitaintainanana, ny fanadihadianay koa dia nahitana tahan'ny fitaintainana 4% ambonimbony kokoa amin'ireo vehivavy mpihetsiketsika ary ny taha 1% avo kokoa ho an'ireo lehilahy mpihetsiketsika noho ny NCS-R. ny NCS-R nahita fa 23% ny vehivavy lehibe ary ny 14% ny lehilahy lehibe dia voan'ny aretin-tebiteby tamin'ny 2001-2003. Raha ny fanadihadiana nataonay dia nahitana fa 27% ny vehivavy respondents ary 15% ny lehilahy mpihetsiketsika no voamarina fa voan'ny aretina mitebiteby amin'ny taona 2020. Hitanay koa fa ny 52% ny vehivavy sy ny 39% ny lehilahy dia voalaza fa miaina ny haavon'ny fitaintainana matetika. .
Ny fitaintainana voalaza eo amin'ny vavy sy ny lahy
Fantatra amin'ny klinika fa mitebiteby ianao 27% dimy ambin'ny folo%
Miaina fanahiana tsy tapaka 52% 39%
Nihorohoro mafy 78% 61%
Ankoatr'izay, ny soritr'aretina fitaintainanana eo amin'ireo mpamaly amin'ny fanadihadiana dia aseho amin'ny vehivavy alohan'ny lehilahy. Ny iray amin'ny vehivavy 5 dia nitatitra soritr'aretina fitaintainanana nanomboka tamin'ny fahazazany (5 ka hatramin'ny 12 taona) fa ny lahy kosa dia nahatsikaritra soritr'aretina matetika rehefa olon-dehibe.
Misy ihany koa ny tsy fitoviana amin'ny zavatra inoan'ny mpamaly mahatonga ny fanahiany eo amin'ny lahy sy ny vavy. Ohatra, ny isan'ny lehilahy indroa noho ny vehivavy dia nino ny fiahiahy ho toy ny voka-dratsin'ny fanafody. Ny fiarovana ara-bola sy ny adin-tsaina any am-piasana koa dia matetika no miteraka fanahiana eo amin'ny lehilahy noho ny vehivavy. Etsy ankilany, ny trauma sy ny génétique dia matetika no voalaza fa miteraka fanahiana eo amin'ny vehivavy noho ny lahy.
Ny antony voalaza fa mitebiteby amin'ny vavy sy ny lahy
ratra 30% 17%
Genetika / tantaram-pianakaviana 26% 18%
Vokatry ny fanafody 3% 6%
Adin-tsaina eo amin'ny toeram-piasana 28% 3. 4%
Ny fiasan-doha dia mety hisy fiantraikany amin'ny lahy sy vavy amin'ny fomba hafa. Ohatra, vehivavy maro kokoa noho ny lehilahy manana fanahiana no nitatitra soritr'aretin'ny fahaketrahana sy aretin'andoha / migraines kokoa noho ny lahy. Mandritra izany fotoana izany, ny lehilahy mitebiteby dia nitatitra ny olana matory kokoa noho ny vehivavy.
Lozam-pifamoivoizana ateraky ny tebiteby amin'ny vavy sy ny lahy
fahaketrahana 53% 43%
Aretin'andoha / migraines 30% 19%
Aretin-torimaso 2. 3% 31%
Hafa ihany koa ny fiasan'ny lahy sy ny vavy amin'ny tebiteby. Vehivavy betsaka kokoa noho ny lehilahy no nitatitra fa tsy nisotro toaka firy, misakafo, manao fanatanjahan-tena ary tsy mifanerasera firy rehefa tratry ny fanahiana.
Ny rafitra fiatrehana ny tebiteby amin'ny vehivavy sy ny lahy
Fihetsika rehefa miaina fanahiana vehivavy aretina
Misotroa toaka bebe kokoa 16% iraika amby roapolo%
Mihinana kely kokoa 2. 3% 18%
Mampihena ny fampihetseham-batana 40% 30%
Aza dia mifanerasera firy 59% 51%
Mifandraika: Ahoana no ahalalana ny fanahiana amin'ny lehilahy
Ny salanisan'ny taonan'ny diagnostika dia eo anelanelan'ny 24 sy 35 taona
Ny fitsapan-kevitry ny Fikambanana Amerikanina mpitsabo aretin-tsaina tamin'ny 2017 dia nahita fa ny millennial (24- hatramin'ny 39 taona ankehitriny) no taranaka be fanahiana indrindra.Ny fanadihadianay dia nifanaraka tamin'ity lamina ity satria ny haavon'ny fitaintainana avo lenta dia hita teo amin'ny 18 ka hatramin'ny 35 taona raha oharina amin'ireo mpandray anjara taloha. Ny ampahatelon'ny valinteny dia nitatitra fa ny soritr'aretin'izy ireo dia nanomboka teo anelanelan'ny taona 13 ka hatramin'ny 19. Ireo nihaino 18 taona ka hatramin'ny 24 taona dia azo inoana fa hiaina soritr'aretina fitaintainanana nefa tsy manana aretina voan'ny aretina raha toa ka 25- ka hatramin'ny 34 no fahita matetika. -taona. Ny ankamaroan'ny olon-dehibe antitra mpihetsiketsika sy valinteny mihoatra ny 65 taona dia tsy nitory ahiahy mihitsy, raha ny valin'ny fanadihadihana nataonay.
Miorina amin'ny fanadihadianay:
Ny iray ampahatelon'ny mpamaly (33%) dia nitatitra fa nanomboka teo anelanelan'ny 13 sy 19 taona ny soritr'aretin'izy ireo.
Ny ampahatelon'ny ankizy 18 ka hatramin'ny 24 taona (34%) dia mino fa manana tebiteby nefa tsy voamarina.
Amin'ireo valinteny izay voan'ny diagnostika momba ny tebiteby, 28% dia 25 ka hatramin'ny 34 taona. Manakaiky ny 60% amin'ireo mpamaly ao amin'ity sokajin-taona ity no miaina fanahiana matetika.
Dimy amby dimam-polo isan-jaton'ny valinteny olon-dehibe 55 ka hatramin'ny 64 taona ary 53% ny valinteny zokiolona 65+ no tsy nitory fa mitaintain-dava.
Ny 5% amin'ireo namaly ihany no nitatitra fa ny soritr'aretin'izy ireo dia natomboka tamin'ny faha-65 taonany, ary ny 13% -n'ireo zokiolona ihany no nitatitra ny fitaintainan'ny fitaintainanana.
Fanamarihana: Ny olon-dehibe (18+ taona) ihany no tafiditra tamin'ny fanadihadianay fitaintainanana.
Ny tahan'ny diagnostika fitaintainanana dia ambany ho an'ny vondrona vitsy an'isa
Ny Amerikanina fotsy hoditra no mety hahatratra ny masonkarena indrindra amin'ny fikorontanan'ny tebiteby amin'ny ankapobeny, ny aretin-tsaina eo amin'ny fiaraha-monina ary ny fikorontanan'ny tahotra, araka ny fanadihadiana natao tamin'ny 2010. Ny diarin'ny aretin-tsaina sy aretin-tsaina . Tao amin'ny fanadihadiana, matetika ny Amerikanina Afrikanina dia nahatratra ny mason-tsivana taorian'ny aretina. Ny amerikana aziatika dia ambany kokoa noho ny hazakazaka hafa ny tahan'ny aretina mitebiteby.
Ireo valiny manaraka avy amin'ny fanadihadianay dia mifanaraka amin'ity lamina ity:
Ampahefatra (25%) ny Amerikanina fotsy hoditra no voamarina fa nitebiteby. 18% fanampiny no mino fa manana tebiteby izy ireo saingy mbola tsy voamarina.
Manodidina ny ampahefatry ny vondrona vitsy an'isa - Amerikanina Mainty (24%), Aziatika-Amerikanina (27%), ary Amerikanina Hispanika (23%) - mino fa manana tebiteby izy ireo saingy tsy voamarina.
Na izany aza, ambany ny tahan'ny diagnostika ho an'ny vondrona vitsy an'isa. Ny 13% amin'ireo Amerikanina Mainty sy 6% amin'ireo Amerikana-Amerikanina ihany no nahazo diagnostia.
Ny adin-tsaina ao an-trano no antony voalohany mampitebiteby an'i Amerika
Ny fitambaran'ny antony mampidi-doza amin'ny fototarazo sy ny tontolo iainana dia miteraka fanahiana. Ny antony fototarazo dia mety misy tantaram-pianakaviana iray mitaintaina, toetran'ny toetra saro-kenatra naseho tamin'ny fahazazany, na aretina ara-batana. Ny anton-javatra ara-tontolo iainana dia mety ahitana ny fipoahana tranga mampivadi-po.
48% amin'ireo namaly no nitatitra ny fihenjanana tao an-trano ka mitebiteby.
32% no nitatitra fa ambany ny fiheveran-tena fa mitaintaina azy ireo. Ny fiheveran-tena ho ambany dia niely indrindra (46%) tamin'ireo mpamaly 18 ka hatramin'ny 24 taona.
Ny tatitra momba ny adin-tsaina any amin'ny toeram-piasana dia miteraka fanahiana. Manakaiky ny antsasaky ny (46%) ny valinteny izay mino ny adin-tsaina any am-piasana no miteraka fanahiana mandritra ny andro. Mitombo koa ny adin-tsaina eo amin'ny toeram-piasana satria mitombo ny karama. Ohatra, 57% amin'ireo valinteny izay miaina ahiahy any am-piasana dia mahazo $ 200,000- $ 500,000 isan-taona raha ampitahaina amin'ny 22% izay mahazo ambany noho ny $ 25,000.
30% no voalaza fa mino fa aretin-tsaina miaraka no miteraka ny ahiahin'izy ireo. Ny famoizam-po no aretin-tsaina mahazatra indrindra eo amin'ireo mpamaly izay nitatitra fa mitaintaina.
28% ny tatitra ara-bola dia miteraka fanahiana.
26% no mitatitra fa miteraka tebiteby ny valanaretina COVID-19.
25% ny tatitra momba ny trauma dia miteraka fanahiana.
23% no nitatitra tantaram-pitaintainanana momba ny fianakaviana.
14% no mitatitra fa ny aretina dia miteraka fanahiana.
12% no mitatitra ny olana ara-pitsarana ara-tsosialy miteraka fanahiana. 20% ny valinteny mino ny olana ara-pitsarana ara-tsosialy no mahatonga ny ahiahin'izy ireo dia mpianatra.
9% no mitatitra antony hafa mahatonga ny tebiteby, toy ny tsy fandanjana simika, ny olana ara-pahasalamana ary ny fifandraisana.
4% dia mitatitra fa ny tebiteby dia voka-dratsy ateraky ny fanafody.
Ny tatitra momba ny 4% dia miteraka fanahiana.
Ny torimaso, ny fifandraisana ary ny fahasalamana ara-batana no tena iharan'ny fanahiana
Ny fanahiana dia mety hanelingelina ny filan'ny fiainana andavanandro amin'ny fomba samihafa arakaraka ny karazana aretina. Ohatra, ny olona manana aretina mikorontana dia mety hampiato ny fanaovana fanatanjahan-tena na fanaovana firaisana mba tsy hampitombo ny soritr'aretina ratsy ara-batana; ny olona manana agoraphobia dia mety hisoroka ny toeram-pivarotana lehibe, ny valalabemandry, ny fandehanany fiara na ny fisidinana aminy - izay toe-javatra mety hananan'izy ireo soritr'aretina mikorontana ary tsy afa-mandositra na mahazo fanampiana, hoy i Jill Stoddard ,Ph.D., psikology monina any San Diego.
61% no mitatitra fa misy fiantraikany amin'ny fahafahan'izy ireo matory ny fitaintainany; 47% no milaza fa tsy dia matory firy izy ireo rehefa miaina fanahiana.
52% no milaza fa misy fiantraikany amin'ny fifandraisan'izy ireo ny fitaintainany; 56% no mitatitra fa tsy dia mifanerasera firy izy ireo rehefa miaina fanahiana.
40% no mitatitra fa misy fiantraikany amin'ny fahasalamany ara-batana ny fitaintainany; 36% no manao tatitra fa kely ny fampiasan'izy ireo rehefa miaina fanahiana izy ireo.
39% no mitatitra fa misy fiantraikany amin'ny fianarany any an-tsekoly na any am-piasana ny fitaintainany; 67% amin'ireo mpianatra no mitatitra fa misy fiatraikany amin'ny zava-bitan'ny sekolin'izy ireo ny fanahiana.
32% no milaza fa misy fiatraikany amin'ny fiovan'ny fiankinan-doha ny fitaintainany; 33% no milaza fa mihinana bebe kokoa izy ireo rehefa miaina fanahiana.
29% no mitatitra fa misy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny fiainana ankapobeny ny fitaintainany.
12% no mitatitra fa misy fiantraikany amin'ny fampiasana / fanararaotana ireo zava-mahadomelina; na izany aza, ny ankamaroan'ny mpamaly dia mampiasa zava-mahadomelina tsy ara-dalàna (53%), misotro toaka kely kokoa (38,2%), ary kely kokoa ny setroka (46%) rehefa miaina fanahiana izy ireo.
9% no mitatitra fa ny fiahiahy dia tsy misy akony amin'ny andavanandrony.
3% amin'ireo mpamaly no mitatitra ny vokatry ny fitaintainanana, ao anatin'izany ny fitondrana fiara, ny fotoam-bahoaka ary ny fitsaboana azy ireo.
75% ny valinteny voan'ny tebiteby dia manana toe-pahasalamana miaraka
Ireo izay miaina fanahiana matetika dia manana aretina ara-tsaina na ara-batana miara-miasa (antsoina hoe comorbidity), izay mety hahatonga ny soritr'aretin'ny fitaintainanana mafy kokoa handresena. Ny famoizam-po no aretina fahasalamana ara-tsaina mahazatra indrindra hiarahana miaina amin'ny fanahiana . Ny taha ambony indrindra amin'ny fahaketrahana sy ny tebiteby dia eo amin'ny vehivavy (53%) sy ny 25 ka hatramin'ny 34 taona (55%). Ireto ambany ireto dia misy ny toe-javatra iaraha-miaina izay iarahan'ireo mpandray anjara amin'ny fanadihadianay dia nitebiteby.
49% no nitatitra ny fahaketrahana
26% no nitatitra ny aretin-torimaso
25% no nitatitra aretin'andoha / migraine
20% no nitatitra fanaintainana maharitra
11% no nitatitra aretina lehibe, maharitra, na tsy maharitra (diabeta, vanin-taolana, homamiadana sns.)
10% no nitatitra ny fivontosan'ny tsinay (IBS)
9% no nitatitra fa aretina misakafo
8% no nitatitra ny tebiteby ara-pahasalamana (hypochondria)
7% no nitatitra ny tsy fahampian'ny hyperactivity (ADHD)
5% no nitatitra fibromyalgia
5% no nitatitra ny aretina vokatry ny fidorohana zava-mahadomelina
4% no nitatitra ny toe-pahasalamana hafa, toy ny aretina autoimmune, aretim-bipolar, ary sclerose maro
3% no nitatitra aretina mitahiry
2% no nitatitra schizophrenia
Ny 25% dia tsy nitatitra ny toe-pahasalamam-pahasalamana niaraka tamin'ny fanahiana
Ireo olona efa zokinjokiny 55-64 taona no tena tsy miahiahy momba ny areti-mandringana COVID-19
Ny areti-mandringana COVID-19 dia nanjary nitombo ny adin-tsaina sy ny tebiteby. NY fanadihadiana momba ny coronavirus tamin'ny volana martsa 2020 dia nanambara fa efa ho ny antsasaky ny (40%) ny valinteny dia miahiahy fa misy torolàlana momba ny halavirana sosialy vaovao hisy fiantraikany amin'ny fahasalamany ara-tsaina. Tany am-piandohan'ny fanidiana, 27% ny valinteny efa nahatsapa ho mitokana, 15% nahatsapa fanahiana bebe kokoa, ary 14% nahatsiaro ketraka kokoa.
Nanomboka tamin'ny volana martsa dia nitombo ireo isa ireo. Tamin'ny fanadihadianay fitaintainana natao tamin'ny volana aogositra 2020, dia nahita ireto manaraka ireto izahaytatistics:
43% no niahiahy bebe kokoa momba ny fahasalaman'izy ireo.
35% no milaza fa nampitombo ny ahiahin'izy ireo ny quarantine.
23% no mitatitra fa nampitombo ny ahiahin'izy ireo ny fanavahana ny fiaraha-monina.
Na izany aza, tsy ny rehetra no milaza fa miahiahy momba ny valanaretina coronavirus:
Quarantine no voalaza fa nihena fitaintainana amin'ny efa ho ny fahafolo (9%) an'ny valinteny 35 ka hatramin'ny 44 taona.
Na dia ny zokiolona 65 taona aza dia heverina fa mety hampidi-doza ny coronavirus, 31% no nitatitra fa tsy nisy fiatraikany amin'ny fanahiana ny aretina ary 15% no nilaza fa tsy niova ny fahasalaman'izy ireo.
28% fanampiny tamin'ireo valinteny 55 ka hatramin'ny 64 taona ihany koa no nitatitra fa tsy nisy fiatraikany tamin'ny fanahiany ny areti-mandringana. Efa ho ny ampahefatry (21%) amin'izy ireo no nitatitra ny fampiasana fomba fiasa mahasalama amin'ny ankapobeny ho an'ny fitaintainanana.
Lehilahy maro kokoa (27%) noho ny vehivavy (20%) no nitatitra fa tsy nisy fiantraikany tamin'ny fitaintainany ny valanaretina.
Ny vidim-bola no sakana lehibe indrindra amin'ny fidirana amin'ny fitsaboana fitaintainanana
Ny aretina mitebiteby dia azo tsaboina tokoa, kanefa ny 36,9% amin'ireo mijaly ihany no mahazo fitsaboana, hoy izy Sanam Hafeez ,Psy.D., neuropsychologist any New York City ary mpikambana ao amin'ny mpampianatra ao amin'ny University of Columbia. Na izany aza, ny fanadihadianay dia nahitana fa betsaka ny olona mitady fitsaboana amin'ny fitaintainany, satria ny 47% amin'ireo mpamaly manana fanahiana dia nitatitra ny fampiasana fanafody na fitsaboana noho ny fitaintainanana. Nijery ireo sakana mety hisakanana ny olona tsy hitady fitsaboana izahay ary nahita fa teo amin'ireo mpandray anjara tamin'ny fanadihadiana dia ny vidin'ny fanafody na ny fitsaboana no mavesatra indrindra.
27% no mitatitra ny vidin'ny fitsaboana sy / na ny fanafody no sakana lehibe indrindra amin'ny fitsaboana fitaintainanana.
26% no milaza fa tsy mila fitsaboana fitaintainanana izy ireo.
24% no milaza fa tsy manana sakana amin'ny fitsaboana izy ireo.
Tatitra 17% tsy fantatr'izy ireo hoe inona ny loharanon-karenany na ny safidiny. Ny ampahefatry ireo izay mino fa manana ahiahy nefa tsy voamarina ara-pahasalamana dia tsy mahalala izay loharanon-karenany na ny safidiny.
13% no milaza fa ny stigma ara-tsosialy manodidina ny aretin-tsaina dia manakana azy ireo tsy hahazo fanampiana. Ny stigma ara-tsosialy dia mitazona ny 22% amin'ireo 18 ka hatramin'ny 24 taona tsy mahazo fanampiana.
12% no mitatitra fa manahirana ny toerana misy ny foibe fitsaboana.
10% no mitatitra fa ny fiantohan'izy ireo dia tsy manarona fitsaboana ara-tsaina.
5% no mitatitra ireo sakana hafa, toy ny valanaretina COVID-19. Ohatra, 11% amin'ireo tanora 18 ka hatramin'ny 24 taona no nahita ny mpitsabo na mpitsabo aretin-tsaina kely noho ny areti-mifindra ary 6% no nijanona tsy nihinana fanafody fanahiana mihitsy.
Ankoatr'izay, ho an'ireo izay mahazo fitsaboana amin'ny fitaintainanana, ny 12% ihany no mitatitra ny fitsaboana azy ireo izay tena mandaitra, midika izany fa manamaivana ny fanahiana tanteraka na saika tanteraka. Valo ambin'ny roapolo isan-jato no mitatitra fa mahomby kely ny fitsaboana azy ireo ary 7% kosa no milaza fa tsy mandaitra ny fitsaboana azy ireo. Ny ankamaroany (53%) dia tsy mampiasa fanafody na fitsaboana mihitsy.
Ny fomba fiasa:
SingleCare dia nanao an'ity fanadihadiana an-tserasera ity tamin'ny alàlan'ny AYTM tamin'ny 4 Aogositra 2020. Ity fanadihadiana ity dia misy mponina 2000 Etazonia olon-dehibe 18 taona. Ny taona sy ny lahy sy ny vavy dia voalanjalanja amin'ny fanisam-bahoaka mba hifanaraka amin'ny isan'ny mponina any Etazonia amin'ny taona, ny lahy sy ny vavy ary ny faritra U.S.
Ahoana ny fomba hahitana mpitsabo mandritra ny areti-mandringana
Fitaovana fitiliana fanahiana, fitsapana-tena ary fangataham-pahasalamana momba ny marary
Fihetseham-po antonony mifanohitra amin'ny fanahiana mafy
Mitadiava vondrona fanohanana fitaintainanana
Lexapro sy fanatanjahan-tena: Afaka miasa ve ianao mandritra ny fitsaboana antidepresy?
Karazana 1 vs. diabeta karazana 2: inona no maha samy hafa azy?
Kaody ICD-10 mahatsikaiky indrindra izay misy
Fahafantarana ny drafitra Medicare Fizarana D
Izay lazain'ny ranao momba ny fahasalamanao
Inona no tokony ho fantatrao momba ny fifehezana ny fiterahana, Xulane
Mpandeha tongotra 17 tsara indrindra ho an'ny zokiolona: ny toro-làlana mividy mora
Flu shot 101: Ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanaovana vaksiny
Mahatadidy ny handray ny medsanao ho reny vaovao
Safidy fanaterana fivarotam-panafody: Ahoana ny fomba ahazoanao meds raha mifanalavitra ny fiaraha-monina
firy isan-jaton'ny mponina no bipolar
inona no fanafody tsara raha manipy
inona no dikan'ny hct amin'ny fitsapana ra
manao ahoana ny hafanana mafana loatra amin'ny tazo
ohatrinona ny 200 mg ibuprofen azoko isan'andro
afaka misotro toaka ve ianao raha mandray zithromax
Fampahalalana Momba Ny Zava-Mahadomelina